Sida loo aqoonsado calaamadaha iyo astaamaha istaroogga
05 / 03 / 2017 /0 Comments/i tayada Articles/av waxyeelladayda
Istaroog, ilbiriqsi kasta! Waxaa loola jeedaa, unugyada maskaxdu si dhakhso ah ayey u dhintaan haddii aysan helin oksijiin. Sidaa darteed, waa muhiim inaad barato calaamadahan iyo astaamaha laga yaabo inay tilmaamayaan istaroog.
Baro sida loo aqoonsado calaamadaha istaroog horeyba maanta. Baadhitaan dhakhso ah iyo daweyn ayaa badbaadin kara nafta isla markaana yareyn karta dhaawaca maskaxda. Xor ayaad u tahay inaad maqaalka la wadaagto warbaahinta bulshada si aad u kordho aqoonta ku saabsan astaamahan.
AMAAL: Qeybta hoose ee maqaalka waxaan sidoo kale ku tusinaa fiidiyow leh soojeedin 6 jimicsi oo jimicsi maalinle ah oo loo sameyn karo kuwa si khafiif ah u saameeya istaroogga.
- Wuxuu garaaci karaa qof kasta iyo qof walba!
Intii lagu guda jiray xaflad xagaaga wanaagsan, haweeney da 'dhexe ah (Berit) ayaa turunturooday oo dhacday. Waxay si dhakhso leh ugu xaqiijisay kuwa hareeraheeda ah inay waxyaabo si wanaagsan ula socdaan iyada inkasta oo qaar badan oo ka mid ahi ay wici doonaan ambalaas. Waxay si dhakhso leh ugu eedeeysay inay ku turunturoodii kabaheeda cusub awgeed.
Waxay cagaha saartay iyada, waxay ruxday geedaha cawska waxayna u adeegtay saxan cusub oo ah cuntada dubitaanka iyo wax wanaagsan oo ku jirta quraaradda. Berit waxay umuuqatay xoogaa ruxmay kadib dhicitaankeedii hore, laakiin waxay umuuqatay inay nafteeda ku raaxaysato fiidkii inteeda kale.
Habeen dambe - xafladda kadib - Berit ninkeedii ayaa soo wacay si uu ugu wargaliyo haddii isbitaal la geeyay iyo in kale. Waxay dhimatay 19 p.m. 00:XNUMX CET.
Berit waxaa ku dhacay istaroog intii lagu gudajiray xafladii hilibbeeri taas oo ku soo baxday natiijo dhimasho ah. Hadday martida ka mid ahi garanayeen macluumaadkan sida loo aqoonsado garaacista - markaa qof ayaa laga yaabaa inuu badbaadiyo iyada.
Dhakhtarka qalliinka neerfaha ayaa sheegay in haddii uu ku helo dhibbane 3 saacadood gudahood, inta badan kiisaska uu ka beddeli karo dhaawacyada gebi ahaanba. Wuxuu sheegay in dhibaatooyinku ay ku jiraan xaqiiqda ah in istaroogga la aqoonsado, la baaro lana daweeyo 3 saacadood gudahood si looga fogaado dhaawacyada xad-dhaafka ah. Halkani waa halka aqoonta guud ay ka timaado - haddii aniga iyo adiga aan baran karno calaamadaha, markaa markaa waxaan badbaadin karnaa nolosha.
Ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tilmaamaha cusub ee istaroogga hoose ee maqaalka.
- SOON: Xeer muhiim ah
Waxaa jira sharci fudud oo lagu xasuusto calaamadaha caafimaad ee istaroogga - oo ah erayga FAST (yacni 'soon' Ingiriisiga, maadaama ay tahay in daaweynta si dhakhso leh loo sameeyo).
F = FACE (Qallalka wajiga. SAXIIX: weydii qofka inuu dhoola cadeeyo. SYMPTOM: dhoola cadey)
A = ARM (Curyaaminta cududda. BAARITAANKA: Weydiiso qofka inuu gacmihiisa kor ugu qaado madaxiisa. SYMPTOM: Ma awoodo inuu gacmihiisa kor u qaado.)
S = LUQADDA (Luqadda oo xumaata
T = CUDUR (jahwareerka hadalka. HALKAN: Xusuus-qor. SYMPTOM: Qofka wuxuu ku hadlaa si aan toos ahayn.)
Hal ama in ka badan oo ka mid ah astaamahan FAST, wac 113 oo sharax astaamaha taleefanka gurmadka ah!
MACLUUMAADKA CUSUB (INFO INFO):
- Carrabku wuxuu tilmaami karaa istaroog
Ilaa hadda tilmaam yar oo aan la garanayn u ah Ola Nordmann, laakiin caan ku ah adduunka caafimaadka. Weydii qofka inuu carrabka ku dhejiyo - haddii uu qalloocan yahay oo uu u jiheysto dhinac dhinac ah markaa tani waxay calaamad u noqon kartaa dharbaaxo!
Dhowr ka mid ah adduunka caafimaadka, oo ay ku jiraan dhakhaatiir badan oo neerfaha iyo dhakhaatiirta wadnaha ah, ayaa isku raacay in haddii dad badani ay aqoonsadaan astaamahan iyo astaamaha istaroogga - markaa qaar badan ayaa horay u heli lahaa daaweyn caafimaad hore oo badbaadiyey noloshooda.
Waxaan ku dadaalnay sidii aan u sameyn lahayn macluumaadkan aqoontiisa. Ma dooneysaa inaad nagu soo biirto dagaalka ka dhanka ah dhimashada iyo dhaawacyada aan loo baahnayn saameynta awgood? Markaa waxaan si xushmad leh idiinka codsanaynaa inaad LIKE, COMMENT iyo SHARE garee qodobkaan kuqoran warbaahinta bulshada. Taabo URL oo ku dheji Facebook-gaaga ama bartaada.
Stroke waa mid nafta halis gelisa wuxuuna u baahan yahay daweyn degdeg ah. La xiriir adeegyada xaaladaha deg-degga ah haddii aad u maleynaysid inaad ku dhici karto istaroog. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad u tagto dhaqtarkaaga joogtada ah baaritaan caafimaad oo joogto ah, jimicsi joogto ah samee oo aad xoogga saarto cunto caafimaad leh, oo kala duwan.
Soo Koobid / Soo Koobid calaamadaha caafimaad ee suurtogalka ah iyo astaamaha istaroogga:
- Kabuubyo lama filaan ah iyo / ama daciifnimo wejiga, gacanta ama lugta ah - gaar ahaan dhinac jirka ka mid ah.
- Jahwareer kedis ah, khalkhal xagga hadalka iyo ku adkaanta fahamka ereyada.
- Arag lama filaan ah ama khalkhal xagga aragga ah oo ku dhaca hal ama labada indhood.
- Dhibaatooyinka isuduwidda lama filaanka ah, dhibaatooyinka isku dheelitirka iyo socodka.
- Madax xanuun daran oo kedis ah, oo aan la garanayn sababta.
[riix h = »30 ″]
Stroke iyo Jimicsi
Ku dhufashada istaroogga waxay u horseedi kartaa daal daran iyo ragga oo waara, laakiin daraasado dhowr ah ayaa muujiyay muhiimadda jimicsi maalmeedka loo diyaarshay iyo layliyo si loo dhiirrigeliyo waxqabadka wanaagsan. Marka lagu daro cunno wanaagsan oo loogu talagalay xididdada dhiigga oo ka wanaagsan. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad ku biirto kooxdaada maxalliga ah ee ku xiran Ururka Slagrammede ee Noorwiijiga si aad u hesho taageero wanaagsan iyo dabagal.
Halkan waxaa ah fiidyow leh talooyin ku saabsan 6 layli maalinle ah, oo uu sameeyey theraprapraprap and Isboortiga chiropractor Alexander Andorff, loogu talagalay kuwa si khafiif ah u saameeya istaroogga. Dabcan, waxaan ogsoonahay in kuwani aysan ku habboonayn qof kasta, iyo in mid loo tixgeliyo taariikhdiisa caafimaad iyo naafonimadooda. Laakiin waxaan dooneynaa inaan xoojino muhiimadda dhaqdhaqaaqa iyo nolol maalmeedka firfircoon.
MUUQAAL: 6 Jimicsi Maalinle ah oo loogu talagalay Kuwa Si Qun yar u saameeya Stroke
Sidoo kale xasuuso inaad si bilaash ah iskugu diiwaan galiso Channelkeena Youtube (riix iyada). Noqo qayb ka mid ah qoyskeena!
AKHRISO: - Daaweynta Cusubi Waxay Kala Bixisaa Dharka Dhiigga 4000x Si Waxtar Leh!
AKHRISO: - Daraasad: Sanjabiilku wuxuu hoos u dhigi karaa dhaawaca maskaxda ku dhaca istaroogga!
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/hjerneslag.jpg?media=1648573622 600 800 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2017-03-05 11:46:572020-02-22 18:49:52Sida loo aqoonsado calaamadaha iyo astaamaha istaroogga
8 Jimicsi loogu talagalay Xanuunka Garabka 6 Faa'iidooyinka Caafimaadka ee Xun